Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Ọbịa ọbịa » Ndụmọdụ kacha mma iji hụ na njem dị mma yana obi ụtọ
Ị nwere ike ịnụ ụtọ ileta ebe ị nwere ike ịbụ onye a na-amaghị aha n'ezie; ọ dị ka ị bụ onye ọzọ otu izu ma ọ bụ abụọ. Ịga ebe ọhụrụ mgbe niile na-ewetara anyị ume na ezi uche. Ọ dị ka ọgwụgwọ a na-achọsi ike, mgbanarị na nsogbu ụwa.
Agbanyeghị, ọ bụrụ na ịchọrọ ịga njem n'enweghị nsogbu, ọ ga-adị mkpa ka ị kpachapụ anya n'ihi na enwere ụdị egwu dị iche iche ị nwere ike ihu. Mgbe ụfọdụ, ihe iyi egwu ndị a na-emebi mmụọ nke njem site n'ime ka ọgbaghara dị ukwuu, ọ na-enwekwa nkụda mmụọ.
Ya mere, ijide n'aka na njem dị nchebe ma dị ụtọ dị n'aka gị, ma ị nwere ike imezu ya site na ịgbaso ndụmọdụ ndị dị n'okpuru.
Mepụta ndabere dijitalụ nke data dị mkpa
Data bụ nnukwu nchegbu maka ndị nomads dijitalụ. Yabụ, jide n'aka na ị na-enwe nkwado ndabere nke ozi paspọtụ gị, njem njem, ntinye akwụkwọ ụlọ oriri na ọṅụṅụ, na ihe ndị ọzọ dị mkpa. Ịmepụta ndabere ga-enye gị uru ma ọ bụrụ na ihe ọ bụla na-atụghị anya ya mere akwụkwọ mbụ gị. Ị nwere ike weghachite akwụkwọ gị mgbe niile na nkwado ndabere na mpaghara ahụ na ngwaọrụ ọhụrụ.
Na mgbakwunye na nke a, ọ bụ ihe amamihe dị na ya ịghara ịkọrọ ndị ọzọ ọtụtụ data n'ebe ọha na eze dị ka ụlọ ahịa cyber. Enwere ohere ka ukwuu na mmadụ nwere ike izu ohi ozi nkeonwe gị.
Kwuo mba maka ịkwọ ụgbọ mmiri
Ị nwere ike ịmaghị nke a, mana ihe ndina bụ ihe nlegharị anya karịa, mana o nwere ihe egwu ya, dịka ịnọnyere ndị ọbịbịa nwere ike ime ka ị ghara izu ohi na ụdị mmekpa ahụ ndị ọzọ. Ya mere, ọ ka mma ịkwụ ụgwọ ego ọzọ ma nọrọ n'ụlọ oriri na ọṅụṅụ ebe ị nwere ike nweta nchebe zuru oke yana nzuzo.
Lezienụ anya maka akpa akpa ma kpachara anya maka igwe mmadụ
Na-amụ anya mgbe niile ka ị na-agagharị n'ahịa mpaghara ma ọ bụ ebe ọ bụla mmadụ juru. Ndị na-akpa akpa nwere ike ịnwa ijide ihe ndị bara uru gị ma ọ bụrụ na ha mara na ihe na-adọpụ gị uche. Ya mere, na-agbalị mgbe niile ilekọta ndị ọbịa nọ gị nso ma debe ihe bara uru n'ihu obi gị karịa akpa azụ gị iji chekwaa ha.
Kekọrịta mmadụ usoro njem gị
Ọ bụ ụzọ magburu onwe ya isi mee ka ndị ị hụrụ n'anya dị jụụ ma ọ bụrụ na ha na-echegbu onwe ha maka njem gị. Ọ baghị uru ma ọ bụrụ na ị na-eme njem naanị gị ma ọ bụ n'ìgwè; na-agbalị mgbe nile isoro ezinụlọ gị ma ọ bụ onye ị pụrụ ịtụkwasị obi kerịta njem gị. Ọ na-achọpụta na ọ bụrụ na ihe ọjọọ ọ bụla emee, opekata mpe mmadụ maara ebe ị nọ ma nwee ike iru gị.
Yabụ, ị nwere ike kesaa nkọwa nke ntinye akwụkwọ ụlọ nkwari akụ gị ma ọ bụ ebe ọ bụla ọzọ ị ga-anọ. Ọzọkwa, ị nwere ike ịga n'ihu otu nzọụkwụ n'ihu site n'ịkekọrịta ha ebe obibi gị.
Na-ebu ngwa enyemaka mbụ mgbe niile
Ọ ka mma ịdị njikere maka ihe mberede ahụike ọ bụla n'ihi na ịnweta enyemaka mbụ n'oge nwere ike ime ka ihe dị mfe, nke na-agaghị ekwe omume ma ọ bụrụ na ị dịbeghị njikere. Ya mere, ọ bụ ihe amamihe dị na ya idebe obere ihe enyemaka mbụ n'ime akpa gị ma buru ya n'oge njem ahụ. N'ezie, lelee ntuziaka izugbe maka ibufe ihe ndị dị otú ahụ.
Zenarị Wi-Fi efu
Ndị njem nwere ike ịla n'iyi na mba ọzọ. Mgbe ahụ, ha nwere ike ịchọ netwọk Wi-Fi efu kacha nso ka ha hụ ebe ha nọ na maapụ. Agbanyeghị, kpachara anya ma a bịa na ijikọ na netwọk Wi-Fi efu. Ha na-enwekarị nchekwa, ma ị kwesịrị nweta VPN tupu jikọọ ha. Jikọọ na sava VPN dịpụrụ adịpụ ma mee ka okporo ụzọ ịntanetị gị ezoro ezo.
Lelee mkpuchi mkpuchi gị
Ị nwere ike ịlele ụdị mkpuchi ụgwọ ụgwọ amụma mkpuchi gị na-enye maka akpa furu efu ma ọ bụ ihe mberede ahụike mgbe ị na-eme njem site n'ụlọ. Ọzọkwa, ọ bụrụ na ịnweghị mkpuchi njem, ị ga-echerịrị ịzụrụ otu ugbu a. Ọ nwere ike ịgbapụta ọtụtụ ihe ndị a na-ezu ohi mgbe a na-eme njem ma kpuchie ụgwọ ahụike.
Ọ bụrụ na ị na-eme njem na mba ofesi, ọ dị mma ịgbaso ntuziaka nchekwa COVID-19 ka ọ bụrụ na ihe ọ bụla mee, ị nwere ike ịgwa ndị ọchịchị ozugbo. Ọzọkwa, ma eleghị anya, ọ ga-aka mma ka ị zere ebe ụfọdụ ma nọgide na-aga njem ndị ọzọ mpaghara.
Gwa ụlọ akụ gị gbasara njem
Ọ bụ ezigbo omume ime ka ụlọ akụ gị mara na ị na-eme njem na mba ofesi ka ha wee belata ohere nke aghụghọ na akaụntụ gị. Ọzọkwa, ụlọ akụ gị ga-ama na azụmahịa emechara na kaadị gị na mba dị iche iche sitere na gị, ọ gaghị egbochikwa kaadị ahụ.
Gbalịa mee ka ndị obodo
Ọ bụ otu n'ime ụzọ kacha dịrị nchebe iji mee njem na obodo ọ bụla n'ihi na ị gaghị adọta uche gaa na onwe gị. Naanị mee ka ndị obodo wee gbalịa ka gị na ha na-akpakọrịta. Ọ ga-ebelata ohere onye ọ bụla na-achọpụta na ị bụghị onye obodo.
Ọzọkwa, mara onwe gị nke ọma na obodo na njem njem gị tupu ịpụ na họtel ahụ. Ọ bụrụ na ịchọrọ ịchọta ntụzịaka maka ogologo oge, tụlee ịbanye n'ụlọ ahịa ma ọ bụ ụlọ oriri na ọṅụṅụ ka ịme ya kama ịnọrọ n'èzí.
Mee nyocha nke ọma gbasara ebe a ga-aga
Ọ dị oke mkpa ịme nyocha nke ọma gbasara ebe a na-aga yana ndụmọdụ na ndụmọdụ njem ọ bụla. Ka ị na-amatakwu banyere ebe ị na-aga, otú ahụ ka ị ga-esi akwado onwe gị maka ya. Ọ ga-enyekwara gị aka ịdepụta ebe ndị nwere ike ịbụrụ gị ihe egwu na a ga-ezere ya ka ọ bụrụ nchekwa. E nwekwara ọtụtụ njem ojoro na ị kwesịrị ịma maka ịnọ na nchekwa. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na onye ị na-amabughị anwa inye gị mgbaaka, ewela ya.
Njem njem bụ maka inyocha na ịnụ ụtọ ihe ọhụrụ, mana ọ dịkwa mkpa ịhụ na ị nọ na nchekwa mgbe ị na-eme ya. Ọ bụrụ na ụfọdụ ihe nhụsianya ma ọ bụ ihe ọjọọ emee, mgbe ahụ ị ga-adị njikere maka ya tupu oge eruo. Ọzọkwa, ebe ọ bụla ị na-aga, chekwaa nọmba mberede nke ebe ahụ mgbe niile iji mee ihe n'oge.